Wararka Maanta: Axad, July 3 , 2013-Iskahorimaad Khasaare Geystey oo Ciidanka Puntland iyo Kooxo Hubeysan ku dhexmaray Magaalada Gaalkacyo
Wararka Maanta- Axad, July 3 , 2013
Dagaalka oo ahaa mid muddo saacad ka badan socdey, wuxuu ka bilowday fagaaraha (Horweyn), kaddib markii dad shacab ah oo aad u caraysani ay kala eryeen taageerayaasha ururka Horseed oo halkaas isugu soo ururay.
Intaas kaddib waxaa goobta soo gaarey ciidamada ammaanka, waxaana rasaas isweydaarsadey iyaga iyo qaar kamid ah dadkii kasoo horjeedey ololaha ururka Horseed. Muddo yar kaddib wuxuu iska hor imaadku isu beddeley mid weyn oo laga dareemay guud ahaan xaafadaha Gaalkacayo.
Maamulaha isbitaalka guud ee gobolka Mudug Dr. Sugulle oo warbaahinta la hadlay, ayaa xaqiijiyey in isbitaalka lasoo gaarsiiyey meydka 3-qof iyo dhaawaca in ka badan 8-qof, wuxuuna intaas ku daray in 3-kamid ah dadka dhaawaca ahi ay askar yihiin.
Intii uu iska hor imaadku socdey waxaa sidoo kale la gubey mid kamid ah gaadiidka ciidamada Puntland, iyadoo dhinaca kale uu hakad galay isu socodka dadka iyo gaadiidka ee xaafadaha qaar.
Xaaladda magaalada Gaalkacayo ayaa xilligan ah mid deggen, haseyeeshee wixii war ah oo kasoo kordha iska hor imaadka maanta Gaalkacayo ka dhacay dib ayaan idiinka soo gudbin doonnaa.